Ufundisisa njani amayeza eCanada simahla i-2022
Apha, uya kufumana iinkcukacha ezipheleleyo ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda amayeza eCanada mahala. Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, kungafuneka uhlawule iindleko zokuhamba ngenqwelomoya kunye neendleko zokuphila kodwa imali yakho yokufunda iya kuba simahla.
Okokuqala, kuya kufuneka uqonde ukuba azikho iiyunivesithi zasimahla eCanada nokuba ungumfundi welinye ilizwe, umhlali okanye ummi waseCanada kuya kufuneka uhlawule imali yokufunda efunekayo kwisifundo sakho.
Nangona ungafundela simahla xa usenza isicelo semali ethile yokufunda, izibonelelo zemali kunye neebhasari ezinokubonelelwa ngurhulumente waseCanada, iiyunivesithi zaseCanada kunye neekholeji, iziseko zoncedo, alumni kunye norhulumente welizwe lakho ukuba ungumfundi wamanye amazwe.
1 Malunga nokuFunda amayeza eCanada
1.1 Ixabisa malini ukufunda amayeza eCanada?
1.2 Kuthatha iminyaka emingaphi ukufunda amayeza eCanada?
1.3 Ngaba umntu wasemzini angafunda amayeza eCanada?
1.4 Izidingo zokuFunda amayeza eCanada
1.5 Izikolo Zonyango eCanada
2 Ufundisisa njani amayeza eCanada simahla
2.1 1. Ulwabiwo-mali kunye noNcedo lwezeMali
2.1.1 Ulwabiwo-mali kwezonyango kunye noncedo lwezezimali eCanada
2.2 2. Imali-mboleko yoMfundi
2.3 3. Yiya kwiiyunivesithi ezifikelelekayo
2.4 Umsebenzi ngelixa ufunda
2.5 Isiphelo sendlela yokufunda amayeza eCanada simahla
2.6.1 I-27 iiyunivesithi eziPhezulu eCanada ngeeScholarships
2.6.2 I-13 i-Scholarships kaRhulumente waseKhanada eFundisiweyo ngokupheleleyo
2.6.3 Uncedo lwezeMali lwaseCanada lwaBafundi baseMelika
2.6.4 Ufumana njani iScholarship eCanada yaBafundi baseKhaya naabaFundi beHlabathi
2.6.5 Ungaphumelela njani kwi-PhD Scholarship eCanada
Malunga nokuFunda amayeza eCanada
Ixabisa malini ukufunda amayeza eCanada?
Iindleko zezifundo zonyango eCanada zixhomekeke ekubeni uthweswe isidanga okanye isidanga sokuqala.
Iindleko zamayeza eCanada zabafundi abenza isidanga ukusuka kwi- $ 8,500- $ 18,300 ngelixa abafundi abaphumeleleyo, isusela kwi- $ 13,500- $ 22,000 kwisemester nganye. Iindleko zezifundo zonyango eCanada ziyahluka phakathi kweyunivesithi nganye kunye neenkalo ezithile zamayeza.
Kuya kufuneka uyazi ngokuchanekileyo ukuba izikolo zonyango eCanada ziinkqubo zokuthweswa izidanga. Kwizifundo zesidanga sokuqala esikhokelela kwisikolo sezonyango, kuya kufuneka uthathe iinkqubo zesidanga sokuqala njengebhayoloji okanye iinkqubo ezinxulumene noko. Yiyo le eya kukunika ukufikelela kwisikolo sezonyango eCanada.
Kuthatha iminyaka emingaphi ukufunda amayeza eCanada?
Ukufundisisa amayeza kwiiyunivesithi zaseCanada ngokubanzi kuthatha iminyaka emi-4 ukuyigqiba ngaphandle kwa University of McMaster kwaye i KwiYunivesithi yaseCalgary apho iinkqubo ziqhuba iminyaka emi-3 ngaphandle kokuphazamiseka ehlotyeni.
Ngaba umntu wasemzini angafunda amayeza eCanada?
Uninzi lweeyunivesithi zaseCanada azibamkeli abafundi bamanye amazwe abangahlali ngokusisigxina eCanada kwisikolo sabo sezonyango kwaye abo benzayo, bamkela abambalwa kakhulu kwaye oku bambalwa kwamkelwa ngokusekwe kwisivumelwano esikhethekileyo sesivumelwano phakathi kwesikolo kunye norhulumente wabafundi amakhaya ilizwe.
Ngaphandle kwale meko, ukwamkelwa kwikhondo lonyango eCanada njengomfundi wamazwe aphela akunakwenzeka. Inani lilonke lokwamkelwa kweendawo zokubeka ezifumanekayo kubafundi bamanye amazwe kwi Izikolo zonyango ze-17 eCanada Ukudityaniswa ndawonye akunakufikelela nakwishumi elinambini kwaye abo bangenayo, bahlawula isixa esikhulu ukuya kuthi ga kwikhulu lamawaka eedola kunye.
Ke njengommi ongengowaseCanada, eyona ndlela yokufumana ubugqirha eCanada kukuba ube ngumhlali osisigxina, unemali enkulu kwaye uzame kangangoko kunokwenzeka ukungena ngaphakathi okanye ukubuyela umva ngokupheleleyo.
Izidingo zokuFunda amayeza eCanada
Oku kulandelayo ziimfuno ezisisiseko zokufunda amayeza eCanada;
Okokuqala, ukubhalisa kwisikolo sezonyango eCanada umfundi kufuneka ukuba ugqibe isidanga se-bachelor kwi-biology okanye kwenye indawo enxulumene noko.
Abafundi mabathathe uvavanyo lobuchule besiNgesi njenge-TOEFL okanye i-IELTS kwaye bapase amanqaku aphakathi asekwe ngamaziko abo okubamba.
Abafundi bamanye amazwe kufuneka babe nemvume yokuqhuba esemthethweni
Abafundi baya kuthatha iimvavanyo zokwamkelwa njengovavanyo lweMCAT okanye lweCASPer kwaye bapase amanqaku aphakathi asekwe liziko labo lokubamba. Ezinye iiyunivesithi zamkela zombini i-MCAT kunye ne-CASPer, ezinye zamkela nje i-MCAT okanye i-CASper
Ukupasa i-GPA ebekwe liziko lakho olithandayo kwaye ulungiselele onke amanye amaxwebhu afunekayo kwisicelo sakho, amanye ala maxwebhu ngala;
3. Ukubhalwa kwezemfundo
4. Cacisa ifoto yepaspoti
5. Ikhadi lesazisi elichanekileyo
6. Ingxelo yenjongo.
Ezi zezona mfuno zisisiseko zokungena kwisikolo sezonyango eCanada, amaxwebhu kunye namanqaku ovavanyo ayahluka ngokwamaziko kunye nobuchule bakho okanye isebe elithandwayo leyeza linokufuna ezinye iimfuno.
Ke, kubalulekile ukuba ujonge kwiziko lakho lokubamba malunga neemfuno ezingaphezulu ezinokufunwa yinkqubo yakho.
Izikolo Zonyango eCanada
Kukho izikolo zonyango ze-17 eCanada kwaye banikezela isidanga sobugqirha se-Doctor of Medicine (MD) esifunekayo ukuze ube ngugqirha okanye ugqirha wotyando eCanada. Ezi zikolo zezi;
IYunivesithi yase-Alberta, iFakhalthi yoNyango kunye noNyango lwamazinyo
IYunivesithi yaseCalgary Cumming, iSikolo sezoNyango
IYunivesithi yaseBritish Columbia, iFakhalthi yoNyango
IYunivesithi yaseManitoba uMax Rady, kwiKholeji yezoNyango
IYunivesithi yeSikhumbuzo yaseNewfoundland, iFakhalthi yezoNyango
IYunivesithi yaseDalhousie, Icandelo leyeza
IYunivesithi yaseMcMaster, uMichael G. DeGroote weSikolo sezoNyango
EMantla e-Ontario, kwiSikolo sezoNyango
IYunivesithi yaseKumkanikazi, iSikolo sezoNyango
IYunivesithi yaseNtshona Schulich School of Medicine kunye noDentistry
IYunivesithi yase-Ottawa, iFakhalthi yoNyango
IYunivesithi yaseToronto, iFakhalthi yoNyango
IYunivesithi yaseLaval, iCandelo loNyango
IYunivesithi yaseMcGill, icandelo leyeza
IYunivesithi yaseMontreal, iFakhalthi yoNyango
IYunivesithi yaseSherbrooke, iFakhalthi yoNyango kunye neeSayensi
IYunivesithi yaseSaskatchewan, kwiKholeji yezoNyango.
Ungafumana Uluhlu oluneenkcukacha zazo zonke izikolo zonyango eCanada Apha.
Ngaphambi kokuba uthethe ngokufunda amayeza eCanada mahala, kufuneka uqale uqiniseke ukuba ulungele na ukwamkelwa eCanada ukuze ufunde amayeza. Njengoko bendibhale ngaphambili, ukwamkelwa kuyo nayiphi na inkqubo yesidanga sobugqirha eCanada kunzima kakhulu kubafundi bamanye amazwe.
Nangona kunjalo, kwabo bafanelekayo, apha ngezantsi kukho iingcebiso ezifanelekileyo zokukunceda ufunde amayeza eCanada simahla okanye ubuncinci ngexabiso elincitshisiweyo okanye lenkxaso.
1. Ulwabiwo-mali kunye noNcedo lwezeMali
Ukusuka kuphando endilwenzileyo, enye yeendlela zokufunda amayeza simahla eCanada kukufaka isicelo sokufunda, iibhasari kunye nezinye iindlela zoncedo lwezezimali eziza kukunceda kwimirhumo yokufunda.
Ngelixa kukho inkxaso-mali exhaswa ngokupheleleyo phaya yabafundi abafuna ukufunda eCanada, kukwakho nezifundo ezifumana inkxaso-mali ngokuyinxenye kwaye kuya kufuneka uyazi umahluko ngokuchanekileyo.
Ukufundiswa ngemali ngokupheleleyo, njengoko igama lichaza, i-scholarships inikezelwa kubafundi abapasa iimfuno zokufaneleka kunye neendlela zokufunda kunye neengxowa-mali zokuhlawula iifizi zezifundo, iindleko zokuhlala, izinto zesikolo, umrhumo wendiza (kubafundi bamazwe ngamazwe) kude kube sekupheleni isifundo sabafundi; Oko kukuthi ukuba umfundi uqhubeka nokusebenza ngokwanelisayo okuchazwe yikomiti yokufunda.
Izifundo ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo zinqabile okanye zimbalwa, akukho zininzi kakhulu kwaye ziyakhuphisana ngokwenyani zokufumana kwaye zinikwe inani elincinane kakhulu labafundi, mhlawumbi abafundi abangama-50 kwelona liphezulu. Ukufundiswa kwezifundo zolu hlobo kuza neenqobo ezininzi kunye neemfuno ekufuneka abafundi babe nazo ngaphambi kokuba baphumelele.
Kananjalo, izifundiswa ezixhaswa ngemali ngokupheleleyo zibonelelwa ngalo naluphi na uhlobo nokuba ezinye iiyunivesithi zaseCanada zibonelela ngezixhobo zokunceda abafundi kwaye, kwiimeko ezininzi, zivuleleke isicelo kubo bobabini abafundi basekhaya nakwamanye amazwe. Kuya kufuneka usoloko uhamba kuyo yonke imfuno yokufunda ngaphambi kokuba ufake isicelo sokuqinisekisa ukuba luhlobo lwemfundo oyifunayo.
Kwisibonelelo semali esixhaswa ngemali, olu hlobo lwezixhobo lusebenza kuphela kwinxalenye yemfuno zabafundi zezemali. Inokugubungela kuphela iifizi zokufunda okanye izinto zesikolo kuphela kwaye kwiimeko ezimbalwa kakhulu, zombini. Kodwa, ayinakuze igubungele iindleko zokuphila kunye neefizi zokubhabha, ukuba bayakwenza oko, ke ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubhatale ngokwakho. Izifundo ezixhaswa ngemali ngokuyinxalenye azinakuze zihlawule zonke iindleko.
Ukufundiswa kwezi ntlobo zixhaphake kwaye kunikezelwa kwinani elikhulu labafundi, kwiimeko ezininzi, i-scholarships ezixhaswa ngemali-mali ziza kanye kuphela ngexesha lokuphila ngelixa ezo ziza rhoqo ngonyaka zinikezelwa kanye kuphela ebomini kumfundi.
Oku kwenzelwa ukuba wonke umfundi ubuncinci afumane ithuba elifanelekileyo lokonwabela izibonelelo zenkqubo yokufunda. Nokuba luphi uhlobo lokufunda oluza ngendlela yakho, luyanceda ekuxhaseni imfundo yakho kwaye lukuncede ukuba ucinge kancinci malunga nendlela yokuhlawula ezinye iirhafu, nokuba kukanye nje.
Uncedo lwezezimali lunokuza ngohlobo lwezixhobo zesikolo zasimahla kunye nezixhobo, amabhaso ezinkozo kunye namanye amabhaso ikwayindlela yokukhuthaza abafundi nabo. Iibhasari zinikwa ikakhulu abafundi abavela kwiindawo ezihlwempuzekileyo, amakhaya adlakazwe yimfazwe kunye namazwe, nangona abanye beza neephakeji ezincinci, nangona kunjalo, basanceda.
Ke, ezi ziindlela ezinxulumene nokufunda apho unokufunda khona amayeza eCanada simahla njengomfundi wamazwe aphesheya okanye wasekhaya. Xa ufaka isicelo sobufundi, kuya kufuneka uhlangabeze neemfuno zokufumana iimfuno zokufunda kwaye ezi mfuno ziyahluka ngamaziko kunye nequmrhu lokufunda elinikezela ngezifundo okanye ibhaso.
Nangona izifundiswa zineemfuno ezahlukeneyo, zabelana ngeemfuno ngokubanzi, ezisebenza kubo bonke abafaki zicelo, ekufuneka uyazi malunga nazo;
Abafakizicelo kufuneka babenentsebenzo esemagqabini kwizifundo, ababandakanyeka kwimisebenzi yeeyure ezongezelelekileyo kunye nobuchule bobunkokeli
Abafakizicelo abaphumelele izidanga kufuneka babenophando olunamandla kwaye kufuneka babeneminyaka embalwa yamava okusebenza.
Abafakizicelo kufuneka babalasele kwiimviwo zobuchule zesiNgesi
Abafakizicelo abaphumeleleyo kufuneka baphumelele kuvavanyo lwe-GMAT okanye lweGRE
Abafakizicelo kufuneka babe ne-GPA ephezulu, yeyona nto iphambili ekunikezeleni ngezifundo zabafundi.
Khangela kwaye ufake isicelo sokufumana inkxaso-mali ngokupheleleyo eCanada kwaye ufake isicelo sokufunda ukuze ufunde simahla eCanada, soloko ufake isicelo sokufunda ngaphezulu kwesinye kwaye ungenise izicelo zakho kwangoko. Ezi ngcebiso ziya kukunceda ufumane isifundi esinokukunceda ufunde amayeza eCanada mahala.
Ulwabiwo-mali kwezonyango kunye noncedo lwezezimali eCanada
Kukho uluhlu olubanzi kakhulu lwamayeza e-Canada, ziyahluka ngokwamaziko kunye neefakhalthi zikwakhona uninzi lwezifundo zokufunda ezixhaswe ziiyunivesithi kunye nealumni. Izifundo ezithandwayo zezi;
I-Vanier Canada Graduate Scholarship
UAlex Peepre Memorial Scholarship (iYunivesithi yaseGuelph)
2. Imali-mboleko yoMfundi
Unokufumana iimali mboleko kwiibhanki, kwiinkampani zemboleko zabucala kunye nakwelinye iziko lezemali ukuhlawulela iindleko zakho zemfundo ngelixa ufunda kwaye uhlawule emva koko, mhlawumbi xa ugqibile ngezikolo kwaye unomsebenzi ohlawulelayo. Olu khetho alunakubonakala ngathi lukhulu kodwa uninzi lwabafundi balusebenzise kwaye ngokuqinisekileyo lusebenze kakuhle kubo.
Uninzi lwabafundi abaphumelele kwezonyango basebenzise le ndlela ukufezekisa iinjongo zabo zemfundo kwaye emva kweenyanga ezimbalwa, ungalihlawula lonke ityala lakho emva kokuba uqalile ukusebenza.
Ukwenza olu khetho lube lula kakhulu, thabatha imali-mboleko kumaziko emali kunye neqonga elinenqanaba lenzala ephantsi kwaye elungele abafundi ukuze ukuhlawula ityala kungabi ngumcimbi omkhulu kuwe. Sinenqaku elipapashiweyo elineenkcukacha ezipheleleyo ngendlela onokwenza ngayo kukhuselekile imali mboleko yabafundi yamanye amazwe eCanada.
3. Yiya kwiiyunivesithi ezifikelelekayo
Faka isicelo kwiiyunivesithi ezinesifundo esiphantsi ukunceda ukunciphisa iindleko zesidanga sakho sezonyango. Oku kunceda indlela ende kakhulu. Ezinye izikolo zinemali yokufunda kwizifundo zonyango ezingaphezulu kwe- $ 10,000 ngexabiso eliphantsi kunenye kwaye oku kokonga imali enkulu kubafundi.
Kwizikolo ezinjalo, ezinye izifundi zemali ezinokuthi zigubungele nje inxenye yeendleko zakho zezifundo zinokuphela zigubungela konke oko kukunceda ukuba ufunde amayeza eCanada mahala.
Ngeengcebiso endizinikileyo, ukhetho lokufaka isicelo kunye nokuya eyunivesithi efikelelekayo kuya kukunceda ufunde amayeza eCanada mahala.
Umsebenzi ngelixa ufunda
Ukusebenza ngelixa ufunda yenye yeendlela zokunceda ngendleko zezifundo zakho zonyango nangona olu khetho lungayi kugubungela ngokupheleleyo iindleko zakho zokufunda ukuba wenza inkqubo yesiqhelo.
Kodwa, ukuba uya kwimfundo yexeshana, umsebenzi olungileyo wokuxhasa unokugubungela iindleko zakho zokufunda kwaye ukushiye nemali epokothweni. Olu lukhetho abafundi abaninzi bamanye amazwe abafuna xa bengakwazi ukukhusela izifundiswa ezifumana inkxaso-mali kodwa inyani kukuba, oku akuzi lula nako.
Ungajonga iposti yethu ufunda njani kwaye usebenze eCanada.
Isiphelo sendlela yokufunda amayeza eCanada simahla
Ezi yunivesithi zonyango eCanada zonke zineengxowa-mali zangaphakathi kunye nezifundo ezivela kweminye imithombo enje ngurhulumente waseCanada kunye nemibutho yealumni kunye nezinye zezi mfundo zokufunda nangona kunqabile kunokukunceda ususe zonke iindleko ezikwenza ukuba ufunde amayeza eCanada simahla ngaphandle kwemali efihliweyo.
Ke, kuya kufuneka usoloko ujonge iphepha lokufunda kwezi yunivesithi ukufumanisa ukuba yeyiphi kwezifundo zokufunda onelungelo lokufumana kwaye unethuba elifanelekileyo lokuchongwa.
Iyeza licandelo lokufunda elinamanqanaba aphezulu kwaye liyabiza kakhulu, ikakhulu kuba ichaphazela ubomi bomntu ngokuqinisekileyo obufuna nje ezona zandla zibalaseleyo.
Ukufumana isidanga se-MD kwiziko laseCanada kuya kukunika umda ofanelekileyo kwicandelo lomsebenzi wezonyango kwiindawo ezininzi emhlabeni.
Ngale nqaku, uyazi ukuba ungazinciphisa njani iindleko zesifundo sakho sezonyango ngokupheleleyo okanye ubuncinci, ngokubonakalayo.
I-27 iiyunivesithi eziPhezulu eCanada ngeeScholarships
I-13 i-Scholarships kaRhulumente waseKhanada eFundisiweyo ngokupheleleyo
Uncedo lwezeMali lwaseCanada lwaBafundi baseMelika
Ungaphumelela njani kwi-PhD Scholarship eCanada
funda amayeza eCanada mahala
Post Previous:Izincoko zeQhawe eliHluphekileyo: Abona baBantu badumileyo kuNcwadi lweHlabathi
Okulandelayo Post:I-9 yeeDigri eziPhambili zasimahla kwi-Intanethi kunye neeDigri zeSemina
Pingback: Izikolo ezili-10 eziBalaseleyo zabahlengikazi eHouston Texas
UMaria Chidiko uthi:
Julayi 13, 2021 kwi-1: 04 pm